DEG DEG:(Dhagayso)Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo meel adag ka istaagay Heshiishkii DP World & Go’aankii Barlamaanka Somalia oo….. | Puntland News
Mudanayaal ka tirsan Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa si weyn u soo dhoweeyey go’aankii Baarlamaanka dowladda Soomaaliya ay ugu soo saareen kuna saxeexeen xeerka cusub ee dalka looga mamnoocayo shirkadda DP World.
Xildhibaan Burhaan Aadan Aw Cabdi oo kamid ah Gollaha wakiilada Puntland oo waraysi gaar ah siiyey Idaacadda Radio Daljir ayaa sheegay in uu sax yahay go’aanka Baarlamaanku ay ka qaadatay heshiiskii DP World iyo kuwa kale.
Mudane Burhaan Aadan Aw Cabdi ayaa ugu baaqay maamulada ka jira gudaha dalka Soomaaliya ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya in ay tix geliyaan shuruucda guud ee dalka Soomaaliya isla markaasna la shaqeeyaan dowladda dhexe ee dalka.
3 Responses to DEG DEG:(Dhagayso)Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo meel adag ka istaagay Heshiishkii DP World & Go’aankii Barlamaanka Somalia oo…..
Dp world, ha laga eryo Puntland. iyada oo aan ixtiraameyno, go,aanka dowlada dhexe. wax laga aamusi karo ma aha.
Dp world ququbka iyo macnaha ka danbeeya dhisitaanka dekedaha oo gumaysi iyo khayraadkeenna oo ay la wareegaan tahay
halaga saaro meel walba oo ay lug kula jidho
Heshiiska waa in Barlamaanka Dowlada dhexe la marsiiyaa,Puntland yeysan meel uga dhicin Madax banaanida Somaliyeed, Dpworld, waa in laga saaraa wadanka, Go,aankaas Puntland haku raacdo dowlada dhexe.